Ka Qayb galayaasha Shirkii Dhuusamareeb oo Daljir Radio uga warramay aragtidooda (dhegayso) – Radio Daljir
Janaayo 20, 2018 1:56 g 0
Dhawaan magaalada Dhuusa-Marreeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo lagu mideynayey maamulkii Alhu-sunna iyo maamulka Galmudug halkaas oo si rasmi ah looga taagay calanka maamulka Galmudug.
Xafladdan oo si heer sare ah loo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Somaliya Maxamed Claahi Farmaajo, madaxda dawlad-goboleedyada Galmudug, PL, Hirshabelle, Guddoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaanno, wasiiro, xubno ka socday beesha caalamka sida QM, Midowga Yurub, Midowga Afrika,Urur Goboleedka IGAD, Turkiga, Itoobiya, Kenya, DJabouti iyo marti marti sharaf kale.
Hadaba markii uu shirkaasi dhamaaday ayaa qaar ka mid ah madaxdii iyo dadweynihii ka qayb galay waxay dareenkoodaa uga warrameen Radio Daljir waxaana makarafoonka la dhexqaaday Axmed Sh. Maxamed Tallman oo ka mid ah wariyeyaasha Daljir ee la socda waftiga Madaxweynaha Somaliya ee socdaalka ku maraya deegaanada Galmudug.
Shirkad soo saarta Kaluunka oo laga hirgaliyaay Magaaladda Xaabo (dhegayso)